ကျွန်မ ရဲ့ နှစ် သက် မူ – Hlataw.com
ကျွန်မ ရဲ့ ခန္တာကိုယ် မှာ အဝတ် အစား မရှိတာ ကြာခဲ့ပါပြီး အဆင် တန်ဆာ ဆိုလို့ လည်ပင်း မှ သားရေ ခွေးလည်ပတ် လေး နဲ့ တွဲထား တဲ့ သံကြိုး တန်းလန်း လေး ။ လက်ကောက် ဝတ် နှစ်ခု ကို ပူးထား တဲ့ လက်ထိပ် လေး တစ်စုံ နဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် လေး တစ်ရံ ပါ ။ ယခု ကျွန်မ ပေါင် နှစ်ဖက် ကို ကား ဆောင့်ကျောင့်ထိုင် တင်ကလေး နောက်ပစ် အနေအထား ဖြစ်နေသည် ။ ကျွန်မ ရဲ့ နို့အုံ နှစ်ဖက် ကို တင်းကျပ်အောင် ကြိုး ဖြင့် တုတ်ထားပြီး နို့သီးခေါင်းလေး နှစ်ဖက် ကို သံကလစ် နဲ့ အညှပ်ခံထား ရတယ် . . ကျွန်မ ပေါင်နဲ့ ခြေသလုံး ကို စုချည် ခံထား ရပြီး ကျွန်မ စောက်ပတ် ပေါ် အားပြင်း ဘိုက်ဘရေတာစက် ကြီး ကို ကြိုး နှင့် တွဲကပ် လည်း ခံထား ရသည် ။
ကျွန်မ ဆံပင် ကို နောက်မှ ကျွန်မ ရဲ့ သခင်မလေး ဖြူဖြူအောင် က ဆွဲ ထားလို့ မျက်နာလေး မော့ နေရ လေသည် ။ ကျွန်မ ရဲ့ ရှေ့မှာ ကမ်းနားသင်္ဘောဆိပ် မှ ကုန်ထမ်း ဂိုဏ်းသမား များ ဆယ်ယောက် လောက်လီး တွေ ကိုင် ကျွန်မ ကို ကြည့်ပြီး ဂွင်းထု နေကျသည် ။တစ်ယောက် က တော့ ကျွန်မ ရှေ့ရပ် နေသည် ။ ကျွန်မ မျက်နာ နဲ့ နီးကပ် နေတဲ့ သူ့လီးကြီး ဂွင်းထု ကာ လရည်များ ကျွန်မ မျက်နာ နုနုလေး ပေါ် ပန်းထွက်လာ လေသည် ။ ကျွန်မ မျက်နာ မှာ ထို လူရဲ့ သုတ်ရည် များ ပေသွား လေသည် ။ နောက် တစ်ယောက် ထပ် လာကာ မျက်နာ ကိုလီး တေ့ကာ လရည် ပန်း ထုတ် ပြန်သည် ။လီးဒစ် အပေါက်မှ အရည်များ ကျွန်မ မျက်နာ ကို ထပ် ပေသွား လေသည် ။ တတိယ တစ်ယောက် က ကျွန်မ ပါးစပ် ဟ ခိုင်းပြီး ပါးစပ် ထဲ ပန်းထည့် ပေးလိုက် ပြန်သည် ။ ဆယ်ယောက်လုံး ဂွင်းထု အပြီး မှာ ကျွန်မ နို့အုံ တစ်ခု လုံးရော မျက်နာ တွေ မှာရော သုတ်ရည်များ ရွှဲနေလေသည် ။ စောက်ပတ် မှ ကျင်စက် ဒဏ် ကို လည်း ခံနေရသည် ။ နို့သီး ခေါင်း လည်း သံညှပ်ကြောင့် နာနေသည် ။
အရှင်သခင်မလေး ဖြူဖြူအောင် က မျက်နာဆံပင် ကို အားကုန်ဆွဲ လိုက်တာ ခံလိုက်ရတော့ ကျွန်မ နာ လို့အော်လိုက်မိသွားသည် ။ သခင်မလေး ကို ကျွန်မ ချစ်ရတာ တွေ က သူမ ရဲ့ နှိပ်စက်မှု တွေ ကြောင့်ပါ ။ ကျွန်မ ဆံပင် အဆွဲ ခံလိုက်ရတော့ နောက်ကို ဖင် ထိုင် ရပ် ကျသွား လေသည် ။ ကျွန်မ ပေါင်နဲ့ခြေသလုံး တွေ က တစ်ဖက်ဆီ တွဲချည် ခံထားရတော့ ကားကား လေး ဖြစ်သွား တယ် ။ ကူလီ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ထပ် ဝင်လာပြီး စောက်ပတ် ကာ တုန်စက် ကို ဖြုတ်ပြီး အရည်တွေ ရွှဲနေတဲ့ ကျွန်မ စောက်ပတ် ကို သူ့လီးချင်း ဆောင့်ထိုးပြီး ဆီးစပ် ခြင်း ထိအောင် ထိုးထည့် လိုက် သည် ။ ထိုလူ ကြီး ကျွန်မ ကို ဆောင့် ဆောင့် လိုးရင်း ကျွန်မ နမည် ကိုပါ တပ်ပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲ ပြီး အရသာ ယူ လိုး သည် ။
” မေမြတ်သူ ဖာသည်မလေး စောက်ပတ် က စီးလိုက်တာ ကွာ ငါ လိုးမ နင့်ဟာ နဲ့ ငါ့လီး ကို ညှစ်ထား စမ်း ” ” အ အား အား ဟုတ် ညှပ်ထားပါ့မယ် သခင် ” ” အေး မင်း လိမ္မာတယ် ခုချိန် မှာ မင်း ငါ့ လရည် ကို ကြိုက်လား မင်း သခင်မလေး စောက်ရည် ကို ကြိုက်လား ” ” နှစ်ယောက် လုံး ကို ကြိုက်ပါတယ် အား အား ” ” ဖေလိုးမ ကောင်းတယ် ဟာ ခံစမ်း ” ” အား အမေ့ နာနာလေး သာ လိုးပါ သခင် ” ” အေး ဒါဆို ခွေးလို ကုန်းလိုက် ” ကျွန်မ စောက်ဖုတ် ထဲ က သူ့လီး ကို ချွတ်လိုက်တော့ ကျွန်မ လည်း သခင်မလေး ဘက် လှည့်ပြီး ဖင် ကုန်းပေး လိုက်ရတယ် . ကျွန်မ တင် တွေပေါ် ကို သားရည်ကြာပွတ် မျှင် တွေ ခက် စပ်စပ် လေး ကျသွား ခဲ့သည် ။ ကူလီသမား ကြီး ဆက် မလိုးသေး ဘဲ သခင်မလေး ဖြူဖြူအောင် သဘောကျ အောင် ကျွန်မ ကို ခုလို ရိုက်ပြ နေခြင်း ဖြစ်သည် ။
သခင်မလေး က ကျွန်မ ကို သူသဘောကျ အောင် နိပ်စက်ပြ ပေးနိူင် ရင် အဲ့ဒီ လူ ကို တစ်ချီ ပေးခံ လေ့ရှိတယ် ကူလီသမားကြီး က သခင်မလေး စောက်ဖုတ် ကို ပါ လိုးချင်နေပုံ ရသည် ။ သူ့ကြာပွတ် ဒဏ် ကြောင့် ကျွန်မ အော်ဟစ် ကာ စိတ်လွတ်လက်လွတ် အရိုက်ခံ ပစ် လိုက်သည် ။ သခင်မလေး ဖြူဖြူအောင် ဖီးလ်တွေ တက်လာကာ သူမ ထမိန် ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ဆိုဖာခုံပေါ် ပေါင်ကား ထိုင်လိုက်သည် ။ ဖြူဖြူအောင် က အိမ်မှာ နေရင် အတွင်းခံ မဝတ် တတ်တော့ စောက်ပတ်ညိုညို လေး က ပြဲရက်သား လေး ဖြစ်သွားသည် ။ ဖြူဖြူအောင် စောက်ဖုတ် က အနံ့လေး နည်းနည်း ရှိသည် ။ ရုပ်လေး က တော့ ချောပါသည် ။ သခင်မလေး စောက်ဖုတ် နံ့ က ကျွန်မ ကို ယက်ချင် လာ အောင် ဆွဲဆောင် ထား လေသည် ။ ” မေမြတ်သူ နင့် သခင်မ စောက်ဖုတ် ကို မြင်တာ တောင် လာ မလျှက် သေးဘူးလား ကိုသန်းထိုက် နည်းနည်း ပိုပြင်း လိုက်ပါအုန်း ” ရွှမ်း . . . ” အား . . . . အား ” ကျွန်မ မဖြူဖြူအောင် ရဲ့ စောက်ပတ်ညို ကြီး ကို နမ်းရှိုက်ကာ မျက်နာ မျက်နာ နဲ့ ပွတ်ပေးလိုက် သည် ။
သခင်မလေး ကော့တက်ကာ သူမ အကျီင်္ကို ချွတ်ပြီး သူမ နို့တွေ ကို သူမ လက်ဖြင့် နယ်ပြီး ချေကာ . ” ဖာသည်မ စောက်ကောင်မ မေမြတ်သူ ဆက်လုပ်စမ်း မနားနဲ့ ငါ့ စောက်ပက် ကို ရှု လျှက် အ အား ” ဖြူဖြူအောင် လည်း ဖီးလ် တွေ တက်နေသလို သန်းထိုက် က လည်း ကျွန်မ ကျောပြင် ကို ဗျောတင် နေလေသည် ။ သန်းထိုက် ကျွန်မ ကုန်းထား တဲ့ ပေါင်ကြား စောက်ဖုတ် ပြူးပြူး လေး ကို သူ့လီးတေ့ ပြီး ဖိ လိုး လိုက်ပြန်သည် ။ ကျွန်မ က အလိုးခံရင်း သခင်မလေး စောက်ပတ် ကို အရသာ ရှိရှိ လျှက်ပေး လိုက်မိရင်း အတိတ် ကို ပြန်သတိ ရ လာမိသည် ။
ကျွန်မ နဲ့ ဖြူဖြူအောင် က နည်းနည်း မှ တည့် တဲ့လူ တွေ မဟုတ်ပါ ။ သက်တူရွယ်တူ အလှပြိုင်တဲ့ အရွယ် မှာ ရန်ငြိုး က မသေးခဲ့ပါဘူး တစ်နေ့မှာ ကျွန်မ မိဘ တွေ ဆုံးသွားတော့ ကျွန်မ အိမ် က စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကို ဦးဆောင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်လာ ခဲ့တယ် . အဲ့ဒီ အချိန် မှာ ဖြူဖြူအောင် နဲ့ သူ့အမေ ဒေါ်ခင်မြ စီးပွားရေး ကျပြီး အိမ်တောင် ပေါင်ထား ရတယ် ဖြူဖြူအောင် လည်း သူဌေးတစ်ဦး ဆီ မှာ သူမ အပျိုရည် ကို ထုတ်ရောင်းခဲ့ရတယ် သူဌေး က သူမကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း နိပ်စက်ပြီး ဆက်ဆံတဲ့ နည်း နှင့် လိုးခဲ့ အတွက် သူမက ခပ်ကြမ်းကြမ်း နိပ်စက်ပြီး ဆက်ဆံတဲ့နည်း ကို စိတ်ပါပြီး သခင်မ အရမ်းဖြစ်ချင်သွားတယ် . ကျွန်မ ဘဲ ကံဆိုးတယ် လို့ မဆိုဘဲ ကံကောင်းတယ် လို့ဆိုရမလား ဘဲ ။ ဖြူဖြူအောင် တို့ အိမ်က ဆုံးသွား ခဲ့ပြီ ဆိုတော့ အပေါင်ခံ တဲ့ သူဌေး ဆီ က ကျွန်မ အိမ်ပြန်ဝယ် ခဲ့တယ် . ပြီးတော့ သူ့တို ကို အိမ်ပေါ် က နှင်ချ ဖို့ ကျွန်မ သူ့တို့အိမ် ကို ထွက်လာ ခဲ့မိတယ် . ကျွန်မ နှစ်ပြားမတန် ပြောပြီး အိမ် ပေါ် က ဆင်း ခိုင်းခဲ့တယ် . ဖြူဖြူအောင် လည်း ကျွန်မ ကို အရမ်းနားကျည်း မုန်းတီး သွား သလို ကျွန်မ ဆို သူ့ကို သတ်တောင် ပစ်ချင် ခဲ့တယ် ။
အဲ့ အချိန် မှာ မထင်မှတ်ဘဲ ကျွန်မ နာခေါင်း ကို အဝတ် တစ်ခု အအုပ်ခံ လိုက် ရပြီး ကျွန်မ သတိလစ်သွား တယ် . ကျွန်မ သတိရ လာတော့ ကျွန်မ ဟာ ကိုယ်တုံးလုံး ဖင်ပြောင်ပြောင် နဲ့ ကြိုးတုတ် ခံထား ရတော့တယ် ။ ဖြူဖြူအောင် ကျွန်မ ပါးကို ဆင့်ရိုက်ပြီး ဆဲ ဆို တော့ ကျွန်မ သူ့ကို ပြန် ဆဲ ခဲ့တယ် . ကျွန်မ က အဖမ်းခံ ထား ရတော့ သူ နိပ်စက် သမျှ ခံ ရတာပေါ့ . ကျွန်မ မျက်နာ ကို သူ့စောက်ပတ် နဲ့ ပွတ် တဲ့ အခါ မှာ ကျွန်မ သေလောက်အောင် မုန်းတဲ့ သူမ ရဲ့ စောက်ပတ် နဲ့ အပွတ်ခံ ထား ရတဲ့ အသိတွေ က ကျွန်မ ကို ကျွန် ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ ခဲ့တယ် . နေ့တိုင်း အရိုက်ခံ အနှိုက်ခံ ရတာ တွေ ကို စွဲလမ်း လာမိသည် ။ ဖြူဖြူအောင် မုန်း လွန်းလို့ သူ့ အနိပ်စက် ကို ပို ခံချင် မိလာတယ် . ဒေါ်ခင်မြ နဲ့ ဖြူဖြူအောင် ရဲ့ စောက်ပတ် တွေ ကို ကျွန်မ လျှက်ရတာ ကို နှစ်သက် မိလာတယ် ။
သခင်မလေး ဆိုပြီး ခေါ်တတ်လာပြီး ကျွန်မ ပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံး ကို အသာတကြည် ပေးခဲ့တယ် ကျွန်မ ဖြူဖြူအောင် စောက်ပတ် ကို တစ်ရက် မှ မနမ်း မလျှက် ရရင် မနေနိူင်တော့ လို့ပါ . ဒါတွေ အားလုံး က သူ့ကို မုန်းလွန်းလို့ . ဒီလို နဲ့ ကျွန်မ ကို အခကြေးငွေ နဲ့ ယောင်္ကျား ပေါင်းများစွာ ကို ခံခိုင်း ခဲ့တယ် . . ကိုသန်းထိုက် လီးထုတ် လိုက်တော့ ကျွန်မ အတွေး ပျက်တောက် သွားတယ် . သခင်မလေး ကျွန်မ ကို စောင့် တွန်းကာ ကိုသန်းထိုက် လီး ကို ဆွဲပြီး သူမ ဟာ လေး ထဲ ထည့်လိုက်တယ် . သန်းထိုက် နဲ့ သခင်မ အားရအောင် လိုးပြီး သန်းထိုက် ကျွန်မ ပါးစပ်ထဲ သုတ်ရည် တွေ ပန်းထုတ် လိုက်တယ် ကျွန်မ မြိုချပြီး သခင်မလေး စောက်ပတ် က စောက်ရည် တွေ ကို ခွေးမ လေးလို လျှက်ပေး လိုက်မိ တော့တယ် ။ သခင်မလေး ကျွန်မ လည်ပင်း က ကြိုးကို ကိုင်ပြီး ဇိမ်ခံ နေတော့ တစ်ချိန် က ဖြူဖြူအောင် တစ်ည လုံး သူ့စောက်ပတ် နဲ့ ကျွန်မ မျက်နာ ဟပ်ရပ်သား အိပ်ခိုင်း ခဲ့တာ ပြန် သတိ ရမိ ခဲ့တယ် . . ကျွန်မ သခင်မ ရဲ့ ဆွဲခေါ် လာ လိုက်ခဲ့ပြီး ကျွန်မ ကို သခင်မ ဖြူဖြူအောင် ကိုယ်တိုင် ရေချိုး ပေး ခဲ့ လေသည် ။ အဲ့ အချိန်မှာ သခင်မဖြူဖြူအောင် ရဲ့ အမေ ဒေါ်ခင်မြ ဝင် လာလေသည် ။
” သမီးရေ ဒီဟာ မ ခေါ်ခဲ့ ဧည့်သည်ရောက်နေလို့ ကျွန်မ လည်း ကျွန် ပီပီ ဖြင့် ” နေပါအုန်း သခင်မကြီး သခင်မကြီး ဟာ ကို မနမ်း မလျှက်တာ ကြာပြီ ပေးနမ်း သွားပါအုန်း ရှင် ” ” ဟဲ့ အချိန်မရဘူး နောက်နေ့မှ တစ်ည လုံး လာ ယက် အခု နင် ရှုချင် ခဏ ရှု ” ဒေါ်ခင်မြ သူမ ထမိန် ကို လှန်ပေး လိုက်သည် ။ အတွင်းခံ တော့ မပါ ။ ဒေါ်ခင်မြ က အသားညို သူမို့ စောက်ဖုတ် လည်း ညို သည် ။ ကျွန်မ ဒေါ်ခင်မြ ဟာ ကို နမ်းလိုက်လေသည် ။ သေးနံ စို့စို့လေး သင်းနေသည် ။ ” ကဲ တော်ပြီ သွားစို့ ” ဧည့်သည် က အခြားလူ မဟုတ်ပါ ။ ကျောင်းတုန်း က ကျွန်မ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းမလေး သက်ထား ပင် ဖြစ်သည် ။
ဘေး တွင် သူမ ယောင်္ကျား ပါလာသည် ။ ” မဖြူ ရေ ကျွန်တော် လိုး ရမည့် ကောင်မလေး က သူလား ဟုတ်လိုးမယ် . ဒါနဲ့ ဗလကောင်းကောင်း လီးကြီးကြီး နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း နိပ်စက်ပြီး ဆက်ဆံတဲ့ သူ တစ်ယောက် လောက်ရမလား ဗျ ကျွန်တော် လည်း မိန်းမ ကို အခြားလူ တစ်ယောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း နိပ်စက်ပြီး ဆက်ဆံ နေတာ ကို ကြည့်ချင်နေလို့ ” ” ရပါတယ် ကိုအောင် ရယ် . ကျွန်မ ဖုန်းခေါ် ပေးမယ် ” ကိုအောင် သူ့ပုဆိုး ကို ချွတ်ပြီး လီး ကြီးကိုင်ပြီး ကျွန်မ ဆံပင် ကို ဆွဲကာ စုပ်ခိုင်း တော့ ကျွန်မ သူ့လီး ကို ယုယုယယ စုပ်ပေးလိုက် တယ် . .
” သက်ထား ကျွန်မ ကို မှတ်မိသွား ပြီး ” ကိုအောင် သက်ထား လည်း မေမြတ်သူ လို ကျွန် ခံ ကြည့်ချင်တယ် ” ” ခံရစေ မယ် စိတ်ချ ” သက်ထား ကို ဖြူဖြူအောင် အဝတ်တွေ ချွတ်ပြီး လက်ထိတ်ခတ် လည်ပတ်ပစ်ပြီး သက်ထား စောက်ဖုတ် ကို အားပါပါ စိတ်ကြိုက် ရိုက်ပေးတယ် သူမ ရဲ့ စောက်ပတ် ကို သက်ထား မျက်နာမှာ တေ့ပြီး ယက်ခိုင်းသေးတယ် . အဲ့ အချိန် မှာ မင်းသူ ဆိုတဲ့ ခပ်ချောချော လူတစ်ယောက် ဝင်လာပြီး ကျွန်မ ကို ဒူးထောက် ခိုင်းပြီး သူ့လီးကို စုပ်ခိုင်းတယ် ကျွန်မ နဲ့ မေမြတ်သူ ယဉ်ထိုင်ပြီး ယဉ်စုပ် ပေးလိုက်ရတယ် . ကိုအောင် မေမြတ်သူ စောက်ဖုတ် ကို ခွေးလိုး လိုးနေ တဲ့ အချိန် မှာ ကျွန်မ ဟာ မတ်တပ်ရပ် ပေါင်ကား ပြီး လက်နစ်ဖက် ကို ဘယ်တစ်ဖက် ညာတစ်ဖက် မြောက်ချည် ခံထားရတယ် ။ ကျွန်မ နောက်က ခါးကို ကိုင်ပြီး အဖုတ် ကို မင်းသူ ခပ်ပြင်းပြင်း လိုး နေသလို ဖြူဖြူ အောင် ရဲ့ ကြာပွတ် အပြား က ကျွန်မ နို့တွေ ထံ အချက်ပေါင်း များစွာရိုက်နှပ်ရင်း ပြည့်ဝတဲ့ကာမခရီးကြမ်းကို ပျော်ပျော်ကြီး စီးနှင်းခဲ့ပါတော့တယ်…ပြီးပါပြီ